रामेछापकाे जुनार पकेट क्षेत्रका किसानको पीडा कसले सुन्ने ? « Ramechhap News
रामेछापकाे जुनार पकेट क्षेत्रका किसानको पीडा कसले सुन्ने ?
२७ कार्तिक, रामेछाप । जुनार उत्पादन हुने क्षेत्रको रुपमा पहिचान बनाउको रामेछापको रामेछाप नगरपालिकाका किसानहरु जुनारको दानाभित्र नै किरा पर्न थालेपछि चिन्तित बन्न थालेका छन् । हरियो जुनारको दानाभित्र नै किरा पर्न थालेपछि धमाधम हरियो नै टिप्न बाँध्य भएका छन् ।
जुनारको दानामा लागेको (ब्याक्ट्रोसेरा मिनाक्स ) का कारण कृषकहरु हरियो जुनार टिप्न बाध्य भएका हुन् । ब्याक्ट्रोसेरा मिनाक्स फल कुहाउने औंसा पार्ने किराले जुनार कुहाउन थालेपछि समय अगाबै जुनार टिप्न बाध्य भएको जिल्लाका जुनार कृषकहरु बताउछन् ।
बिगत तीन बर्षदेखि जुनार खेतीमा यो समस्या देखिदै आएको भए पनि सरोकारवाला निकायले ध्यान भने अझै पुग्न सकेको छैन् । रामेछाप नगरपालिका–७ सुकाजोरका जुनार कृषक लक्ष्मी कार्कीले तीन बर्षदेखि जुनारमा किरा लाग्ने समस्या आएपछि सरकारले कुनै ध्यान नदिएको बताउनुभयो । उहाँले रामेछाप न्युजसँग भन्नुभयो,‘सरकारले कृषि क्षेत्रमा परिवर्तन गर्ने भनेको सुन्छौ, लगाएको जुनारको दाना कुहिएर हैरान भएको तीन बर्ष भयो, पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि समस्या समाधानको लागि कतैबाट पनि पहल नहुदा दुःखी छौं ।’
गत बर्ष जिल्लामा भन्दा बढी किराको प्रकोप भालुखोपमा देखिएको थियो । सो क्षेत्रका सबै जुनार कृषकहरुले यस वर्ष पनि किराको व्यवस्थापन नहुँदा ठुलो घाटा व्यहोर्नु परेको छ । भालुखोपका कृषक मोहन श्रेष्ठले जुनार किसानको समस्या समयमा नै ध्यान नदिदा जुनार खेतीको विकल्प खोज्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति गर्ने भनेर नारा लगाउदै छ, हाम्रो जीविर्कोपार्जन गर्ने जुनारमा किरा लागेर हैरान पारेको समस्या समाधान गर्न ध्यान नै दिदैन ।’ उहाँका अनुसार विगतको बर्षमा भन्दा यस वर्ष जुनारमा किराको प्रकोप धेरै देखिएको छ । प्रकोप कै कारण किसानहरुले सहुलिय मुल्यमा व्यवसायिहरुलाई हरियो जुनार बेचिरहेका छन् । सुकाजोर,आख्रेनी , भालुखोप , गाइटार, भंगेरी लगायतका जुनार पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएका सबै क्षेत्रका जुनार कृषक प्रकोपको शिकार बन्नु परेको छ ।
जुनारको दानाभित्र किरा लाग्ने समस्याले हरियो दाना र सस्तोमै जुनार बेच्न बाँध्य भएको कृषकहरुको बताउछन् । जिल्लामा हरियो नै भएपनि हाल एक दानाको मुल्या १० देखि १५ रुपैयाँ पर्ने गरेको छ । किसानसँग व्यापारी (बिचौलिया) ले भने भने तीन देखि चार रुपैयाँमा सिधै बोटबाटै खरिद गरेर ल्याउने गरेका छन् । किराको कारण हरियोमा नै जुनार बेच्नु पर्ने बाँध्यता र त्यसमाथि पनि सस्तोमा बेच्नु पर्दा रामेछापका जुनारा कृषक निकै पीडामा परेका छन् ।